Mahad iyo Sharmaarke: W/Q Yusuf Garaad
Friday August 19, 2016 - 06:24:17 in Maqaallo by
Waxay ahayd maalin weekend ah oo aan shaqada ka nasanayo. Bartamaha ayaan uga jirnay xilliga kuleylaha ee hawada Yurub ay wanaagsan tahay, sannadkuna waa 2007. Magaalada hoose ee London ayaan qof la fadhiyay makhaayad Talyaani ah. Si deggan ayaan isa
Waxay ahayd maalin weekend ah oo aan shaqada ka nasanayo. Bartamaha ayaan uga jirnay xilliga kuleylaha ee hawada Yurub ay wanaagsan tahay, sannadkuna waa 2007. Magaalada hoose ee London ayaan qof la fadhiyay makhaayad Talyaani ah. Si deggan ayaan isaga sheekeysaneynay markii ay farriin qoraal ahi ii soo dhacday.
Weriye Mahad oo ka tirsan HornAfrik ayaa Xamar lagu dilay, ayaan ka akhristay. Weriye Cabdinur Shiikh Maxamed Isaxaaq oo maalintaa joogay Istudiyaha BBC ee Bush House ayaa farriinta ii soo diray. Wuxuu ii raaciyay Cali Iimaan ayaan ka wareysannay.
Allah ha u naxariisto ayaan ugu jawaabay.
Waxay u horreysay farriimo isdaba joog ah oo qoraal iyo maqal isugu jiray, oo wargelin iyo talo weydiin ahaa oo iska soo daba dhacay iyo jawaabahooda.
Aniga oo dareenka la ii sheegay uu shucuurteyda beddelay ayaan haddana iska adkeystay oo aan sheeko la sii waday qofkii aan wada fadhinnay oo ah qof aan hore u ballansaneyn.
Farriin ayaa ii soo dhacday. Markaan waa weriye Celeste Hicks. Waxay maalintaa diyaarineysa barnaamijka Focus on Africa oo sida magaciisa ka muuqata qaaradda u tebiya wararkeeda oo af Ingiriis ah. Celeste waa gabar in badan safarro shaqo ku tagtay Soomaaliya. Warar ayay ka soo tebisay, tababbarrana wey ka bixisay. Waxay baraty xoogaa af-Soomaali ah iyo Soomaali u badan weriyayaal. Waxay talo iga weydiisay cidda ay ka wareysan karto dilka weriye Mahad.
Waxaan u qoray: La hadal Cali Iimaan nambarkiisa haddaadan haysan ka qaado laanta Soomaaliga, ayaan u daba dhigay.
In yar ka dib, farriin kale ayaa ii soo dhacday. Cali Iimaan waa la dilay, ayaa i soo gaartay. Waxaan hubsaday Mahad iyo Cali labada midka la dilay. Waxaa ii soo baxday in labdaba la dilay. Mahad asaga oo shaqo u socda ayaa la dilay. Cali-na isaga oo ka soo laabanaya aaska Mahad ayaa waddada lagu dilay.
Aniga oo yaabban walaac badanina igu dhashay ayay farriin kale ii soo dhacday. Celeste ayaa igu soo laabatay. Waxay tiri Cali Imaan-ka aad wareyso i leedahay waa kee? Sharmaarke miyaa?
Waxaan ugu jawaabay haa, laakiin waa too late. Isagana waa la dilay.
Waxay ka mid ahayd maalmo aad u badan oo aniga oo fadhiya goob shaqo, waxbarasho ama madaddaalo la ii soo sheegay war igu dhaliyay murugo ay igu adkaatay in aan sii wado wixii aan markaa hayay. Waxaa ii dheeraa in marar badan dadka aan la joogay ay ka ahaayeen warmoog waxa aniga i beddelay. Sababta oo ah dad badan oo macaammil naga dhexeeyay oo aan inta badan wada joognay waxay ahaaayeen dad aan Soomaali ahayn.
Cabdulqaaddir Yaxe ayaan xusuustaa in aniga oo fasal ku jira magaalada Boston aan dilkiisa ka warhelay. Diblomaasi Swiss ah oo aan isku fasal ahayn ayaa ii sheegay. Internetka ayaan ka hubsaday. Waan sii fadhin kari waayay fasalka oo dibadda ayaan uga baxay. Dhex fariistay cawska beer nasasho oo Iskuulku ku dhex yaal. Dib waan ugu noqon kari waayay fasalkii.
Waxaa mowduucan kooban igu dhaliyay qoriddiisa, Xus Cali Imaan oo shalay lagu dhigay Muqdisho.
Ilama aha in dilka Xanafi oo ku lug lahaa shirqoolka weriyayaashan iyo qaar kaleba uu yahay xalka kama dambeysta ah ee sugidda bedqabka weriyayaasha.
R/Wasaaraha Qaabilay Ergayga Gaarka Ah Ee Hay'ada UNHCR U Qaabilsan Geeska Afrika
Sunday October 24, 2021 - 14:29:03
Taliyaha Qaybta Police-ka G/Bari Oo Sheegay In Maqribka Kadib La Joojin Doono Isku Socodka
Sunday October 24, 2021 - 14:18:58
Dowlada Oo Sheegtay In Fursad La Siiyay Maleeshiyada Ahlu-Suna Inay Uga Baxaan Guriceel
Sunday October 24, 2021 - 14:09:32
Khasaarihii Dhimasho Iyo Dhaawac Ee Ka Dhashay Dagaaladii Deg/ Guriceel Oo Kor U Sii Kacay
Sunday October 24, 2021 - 13:26:41
Dab Ka Kacay Mid kamid Ah Warshadaha Isbuunyada Magaalada Bosaaso
Sunday October 24, 2021 - 13:09:15
R/Wasaaraha Federalka Oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Safiirka Dowladda Sacuudi
Saturday October 23, 2021 - 20:52:42
14/01/2010 - 20:46:07
04/05/2009 - 16:55:44
14/08/2017 - 19:09:41
20/04/2009 - 10:39:00
22/05/2009 - 07:02:36
Baarlamanka Jubbaland Oo u yeeray Axmed Madoobe
20/08/2016 - 08:08:24
Dawlada oo beenisay Kulankii Madaxwaynaha iyo Natenyahu
09/07/2016 - 23:58:05
Sargaal Ka Tirsan Al-Shabaab Oo Lagu Qabtay Koonfurta Gaalkacyo,
15/08/2016 - 21:33:08
Qooto Qooto W/Q Yusuf Garaad (video)
08/08/2016 - 06:43:48
19/08/2016 - 06:24:17
20/08/2011 - 17:13:38
02/11/2010 - 20:21:19
01/06/2011 - 13:24:02
11/10/2010 - 05:18:44
28/10/2010 - 22:06:32
08/07/2021 - 17:30:00
04/07/2021 - 00:07:10
01/07/2021 - 10:44:14
21/01/2021 - 05:37:14
20/01/2021 - 21:10:15
09/01/2021 - 17:53:54
25/07/2020 - 06:02:36
25/07/2020 - 05:56:26
24/07/2020 - 06:14:59
12/11/2018 - 22:43:31
SJS and UNSOM conclude three-day journalists training on Freedom of Expression: Rights and Responsibilities in Mogadishu
04/01/2021 - 12:34:10
Ugaas Cumar Geelle oo hanbalyo u diray Ugaas Hassan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble.
29/07/2016 - 08:31:25
Xagee Haweenka Soomaaliyeed lagu xaqiray? by Dr. Idris Khalaf
07/07/2016 - 21:35:19
Meeraysane Media Nerwok oo idin leh Ciid Mubaarak
06/07/2016 - 02:03:14
Copyright © 2009 - 2021 Meeraysane Media Network All Rights Reserved. - Site Designed & Developed by Ileys Inc